Real-Nguva Kutaurirana: Chii chinonzi WebRTC?
China, Gunyana 5, 2019 Muvhuro, October 5, 2020 Sienna Amelia
Yechokwadi-yenguva kutaurirana kuri kuchinja mashandisiro ari kuita makambani avo kuvepo kwewebhu kuita zvine mutsindo kubatana pamwe netarisiro uye vatengi. Chii chinonzi WebRTC? Webhu Chaiyo-YeNguva Kukurukurirana (WebRTC) muunganidzwa wematanho ekutaurirana uye maAPI akambogadzirwa neGoogle iyo inogonesa chaiyo-nguva izwi uye vhidhiyo kutaurirana pamusoro pezera-kune-vezera kubatana. WebRTC inobvumira mabhurawuza ewebhu kukumbira ruzivo rwechokwadi-nguva kubva kumabhurawuza evamwe vashandisi, zvichigonesa chaiyo-nguva vezera-kune-vezera uye kukurukurirana kweboka kusanganisira izwi, vhidhiyo, chat, kufambisa faira, uye skrini
China, November 8, 2018 Chishanu, Mbudzi 9, 2018 Douglas Karr
Zvinogona kunongedzera kune dzimwe nyaya dzekushandisa nesoftware yako kana iwe usingakwanise kuita chimwe chinhu chiri nyore sekuwedzera mumwe mushandisi… ahhh, asi ndozvatinoda tese nezveGoogle Analytics. Ndiri kunyora ichi chinyorwa kune mumwe wevatengi vedu kuti vagokwanisa kutiwedzera isu semushandisi. Kuwedzera mushandisi harisi iro basa rakareruka, zvakadaro. Kutanga, iwe uchafanirwa kuenda kuAdmin, iyo Google Analytics yakaenda kuruboshwe kuruboshwe rwekufamba